‘मेरा भावना पोख्न सक्ने अक्षरको आविस्कार विज्ञानले गर्न सकेको छैन’ « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०७७, आईतबार
– गोपी मैनाली
नाम : गोपी मैनाली
जन्ममिति : वि.सं. २०२० असार
माता/पिताः स्व.रेवती मैनाली/स्व.केदारनाथ मैनाली
अध्ययन ” स्नातकोत्तर (अर्थशास्त्र, जनप्रशासन र पब्लिक एफेएर्स मेनेजमेन्ट),
वित्तीय व्यवस्थापनमा डिप्लोमा (म्यास्ट्रिच स्कुल अफ मेनेजमेन्ट, नेदरल्याण्ड), अन्तर्राष्ट्रिय करमा डिप्लोमा (जापान) ।
प्रथम प्रकाशित रचना : संस्मरण भएन ।
१) अवसाद अभिनयी (निबन्धसंग्रह)
२) आखाभरि रमिता, मनभरि वेदना (नियात्रा)
३) युगकवि सिद्धचरण : कृत्ति र प्रवृत्ति विश्लेषण (समालोचना)
४) अपेक्षा र अनुभूति (समसामयिक निबन्ध)
५) कविता, आकार, समकालीन साहित्य, सुलेख, शारदा, व्यथा, गरिमा आदि पत्रिकामा कविता, कथा, समालोचना, निबन्धहरु प्रकाशित ।
प्रकाशनोन्मुख कृति : २
विभिन्न पत्रिकामा कथा, कविता, निबन्ध, समालोचना, नियात्रा र समसामयिक रचना प्रकाशित ।
राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार (वि.संं. २०७७) प्राप्त
यहाँको साहित्य लेखन कहिलेबाट सुरु भयो ?
म सानैदेखि साहित्य र संगीत मन पराउँथें । मेरो घर काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको कानपुर (हाल नमोबुद्ध नगरपालिका) हो– जुन प्राकृतिक सुन्दरताले भरपूर पहाडी वातावरण, तलतिर रोशी खोला र माथितिर तिमाल पर्वतशृंखला छ । यही प्रकृतिसँग हातेमालो गर्दा, रोशीखोलामा डुबुल्की मार्दा आप्mना मनमा आएका सुखदुखका भावना कापीमा भर्थें । मलाई सम्झना भएअनुसार कक्षा चारतिर पढ्दा कविता लेख्न थालें । त्यो नै मेरो लेखनको सुरुवात थियो भन्ने लाग्छ । विद्यालयमा कविता प्रतियोगितामा भाग लिन थालें । अरुलाई जितेर पुरस्कार पनि पाउन थाले । त्यसपछि निबन्ध लेखनतिर पनि थाहै नपाई मन अघि बढेछ ।
प्रकृति र परिवेशले नै प्रेरणा दिएको हो । प्रकृति र परिवेश नै मेरा प्रेरणाका स्रोत हुन् । पछि अलि बुझ्न थालेपछि भने घर परिवार, विशेषतः मेरा हजूरबुवा सूर्यकान्त मैनालीको प्रेरणा रह्यो । उहा सारै धार्मिक प्रवृत्तिको व्यक्तित्व हुनुन्थ्यो । कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीले हाम्रै गाउँघरका जीवनी र पात्र उठाएर कथा लेख्नुभएको पढें, त्यसले पनि प्रेरणा दियो । अलिपछि लक्ष्मी निबन्धसंग्रह र मुनामदनले प्रेरणा दियो । वरिष्ठ समालोचक, कथाकार एवम् व्यङ्ग्यकार युवराज मैनाली मेरा दाजु हुन् । उनको प्रोत्साहन रह्यो । युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ, दिदी पारिजात, मञ्जुल दाइ, धीरेन्द्र मल्ल, विश्वनाथ नेउपानेहरुसँग सम्पर्कमा भएपछि अरु लेख्न मन लाग्यो । आमाको सुम्सुम्याइ र वात्सल्य प्रेम लेखनीका ऊर्जा बने । सबैभन्दा ठूलो प्रेरणा आफ्ना भोगाइ, दुख र छट्पटी र संघर्षबाट भयो । वास्तवमा प्रत्येक सिर्जनामा म आफैं पोखिएको छु, अक्षरहरु मेरै दुःख, पीडा, छट्पटी र संघर्षका विम्ब हुन् ।
कसरी बढिरहेको छ त लेखन गतिविधि ? वर्तमान लेखनप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
म फुर्सदमा लेख्छु । चाहेजतिचाहिँ लेख्न सकेको छैन । कथा, निबन्ध र नियात्रा लेख्छु । मनले खाएको सिर्जना भेटें र पढ्ने फुर्सद पाएँ भने समालोचना पनि गर्छु । प्रतिनिधि लेखकका प्रतिनिधि प्रवृत्तिको समालोचना गर्न मन छ । केही लेखेको छु, पूरा गर्न सकेको छैन । केहीअघि ‘युगकवि सिद्धिचरण ः कृत्ति र प्रवृत्ति विश्लेषण’ प्रकाशन गरेपछि अर्को समालोचना ‘अभिव्यञ्जना यात्राप्रति’ पूरा गर्न पाएको छैन । निजात्मक निबन्ध (कथानिबन्ध) पूरा गर्न लागेको छु । अहिले जिम्मेवारीले पनि धेरै थिचेको छ । म सार्वजनिक ओहदामा रहेकाले पनि पहिलो काम सार्वजनिक जिम्मेवारीको हुने भयो । लेख्नलाई समय र परिवेश दुवै चोर्न पर्छ (मलाई लेख्न एकान्त चाहिन्छ) । समय र परिवेशको जोहो गर्न असजिलो पर्छ । संस्था र जिम्मेवारीप्रति न्याय गर्न सकिनँ भने मेरो लेखनी तथा सिर्जना पनि फेक हुन्छ । अझ भनौं आफैंंप्रति र साहित्यप्रति नै अन्याय हुन्छ । आफैंलाई अन्याय गर्ने कसरी स्रष्टा बन्ने ? यही भावनालाई अन्तर्बोध गरेर नै सिर्जना गर्छु ।
पहिला आफ्ना दुःखलाई सिर्जनामा पोख्थे वा भनौं विरेचन गर्थें । अहिले परिवेशका पात्रलाई सिर्जनाका आधार बनाएर लेख्छु । नेपालको जीवनशैली, सीमान्तीकृत र विपन्नको जीवनवृत्ति, भोगाइ, पीडा, जीवनका जटिलतालाई जिम्मेवारीका क्षेत्रमा रहँदा बनाउने नीति कार्यक्रममा पनि अनुवाद गर्छु– जसलाई म कार्यमूलक साहित्य भन्न रुचाउँछु । मेरा जिम्मेवारीका क्षेत्रमा सदैव तिनै दीनदुखीको जीवनवृत्ति प्रतिविम्बित हुन्छन् । त्यसैले मैले निजामती सेवामा पनि यथार्थ साहित्य गरिरहेको छु । म वर्तमान लेखनप्रति सन्तुष्ट छैन । सन्तुष्टि त जीवनमा हुँदैन नै । सन्तुष्टिमा साहित्य सिर्जिन्न पनि । त्यसैले म आफ्नो लेखनीबाट सन्तुष्ट छैन । लेखनीको वर्तमान प्रवृत्तिबाट पनि सन्तुष्ट छैन । विचार र प्रविधिको विश्वव्यापी विष्फोटले मानव जीवन र साहित्यमाथि धावा बोलेको छ । सर्जक पनि अल्मलिएझैं लाग्छ । निर्वैयक्तिकता छ । पाठक र दर्शक मनभन्दा शरीरमा रमाउन थालेका छन् । हृदयभन्दा आँखालाई स्वाद र सन्तुष्टि खोज्ने पाठकका कारण पनि साहित्य सिर्जना प्रभावित छ । त्यसैले फेरि अर्को साहित्यिक आन्दोलनका आवश्यकता छ, तेस्रो आयामभन्दा पनि ठूलो आन्दोलन । सडक कविता क्रान्तिभन्दा पनि ठूलो ।
दुईवटा कृतिको प्रकाशन तयारीमा छु । ‘अभिव्यञ्जना यात्राप्रति’ र ‘कथानिबन्ध’ । यी दुवै सामयिक जीवनका अभिव्यक्ति हुन् । पहिलोमा प्रतिनिधि सिर्जनाको मूल्य विवेचना गरेको छु (गर्दैछु) । दोस्रो कथानिबन्धमा छुट्टै प्रयोग गरेको छु (गर्दैछु) । प्रतिनिधि पात्रमार्फत समाजका उकुसमुकुस, कुण्ठा, अपेक्षा, आकांक्षा र उद्वेगलाई विम्बात्मक प्रस्तुतिको प्रयत्न गर्दैछु । प्रयोगवाद पनि साहित्यमा नवप्रवत्र्तन हो भन्ने लाग्छ । त्यही गर्दैछु ।
साहित्य र स्रष्टाप्रति राज्यको जिम्मेवारी अहम् हुन्छ । यसको मतलब साहित्यकारलाई राज्यले पैसा देओस् भन्न खोजेको होइन । लेखनवृत्ति देओस भनेको होइन । राज्य त सबैको अभिभावक हो । उसले वातावरण बनाइदिनुपर्छ । उसले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साहित्यिक अनुष्ठानहरु प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । साहित्यिक अनुष्ठानमा राम्रा सर्जक समेटिनुपर्छ । पढ्ने वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा साहित्य र स्रष्टा समाजका पथप्रदर्शक हुन्, दिशाबोध गर्ने, सन्देश तथा शिक्षा दिने काम यसबाट हुन्छ भन्ने राज्यले बुझ्नुपर्छ । स्रष्टा स्थायी प्रतिपक्ष हो भन्ने सोच कतै रहनुहुन्न । भजन र नारालाई साहित्य भन्ने अतिवादी प्रवृत्ति हुर्किन दिनु हुन्न । सिर्जनामार्फत सर्जकले समाजलाई अनन्त ऊर्जा दिन्छ भन्ने बुझाइका साथ राज्यले साहित्यलाई अन्तर्बोध गर्नुपर्छ ।
मेरो साहित्यिक आदर्श जीवनवृत्ति हो । कथा होस् वा निबन्ध– जहाँ पनि अक्षरले जीवनलाई बोकोस् । जीवनको भोगाइ, उद्वेग र उहापोह सिर्जनामा पोखिनुपर्छ । त्यही मेरो साहित्यिक आदर्श र मूल्य हो । अक्षरले जीवनका अनुभूति टिप्न सक्नुपर्छ । अक्षरमा जीवन हुनुपर्छ । यही मेरो सिर्जनाको आदर्श हो ।
सबै सर्जक आ/आफ्नै परिवेश र आग्रहका दास हुन् । म कसैलाई आरोप पनि लगाउन्नँ र कसैप्रति पनि आग्रह गर्दिनँ । तर सर्जकले डिस्रप्टिभ आइडिया, समाजलाई उथलपुथल गर्ने विचार ल्याउन सकेको छैन । साहित्य सिर्जनाले त समाजलाई सिर्जनशील तनाव (क्रिएटिभ टेन्सन) दिनुपर्छ । लेखकीय दायित्व कला कलाका लागि मात्र भनेर सिर्जिने होइन र कला स्वच्छन्दताको बयेलीमात्र होइन । समाजलाई शिक्षा, सन्देश, मनोरञ्जन र स्रष्टा मनको उदात्तीकरणजस्ता विषयको संगम हुनुपर्छ सिर्जना । केही प्रतिभा लेखकीय दायित्व पूरा गर्ने प्रवृत्तिमा छन्, बेजोड प्रतिभा पनि छन् तर ती ओझेलमा छन्, स्थापित हुन सकेका छैनन्, अस्तित्वको संघर्षमा छन् । स्थापित हुन पनि समूह समाउनुपर्छ हामीकहाँ ।
छैन । दुई कारणले आफ्ना कृतिबाट सन्तुष्ट छैन । पहिलो, मैले भन्न खोजेजति भन्न सकेको छैन । मेरा भावनालाई पोख्न सक्ने अक्षरको आविस्कार नै विज्ञानले गर्न सकेको छैन । जति लेखेको वा पोखेको छु– त्यो सम्प्रेषणका हिसाबमा पूर्ण छैन । अरु स्रष्टालाई पनि यस्तो अनुभूति हुन्छ कि ? थाहा छैन । दोस्रो, लेख्नपर्ने कुरा, उठाउनुपर्ने पात्र, टिप्नुपर्ने अनुभूति त्यही समयमा अभिव्यक्त गर्न समयले साथ दिँदैन । त्यसैले लेखनीमा जीवनको अन्तर्बाेध पूर्ण रूपमा गर्न नसकिएकोमा पनि सन्तुष्ट छैन । तेस्रो, सन्तुष्टि त सिर्जनामा कहिले पनि हुँदैन । तर सिर्जना वा कृतिप्रति माया लाग्छ । लाग्छ– ती मेरा सन्तान शुभम्, सुव्रत (बाबुहरु) जस्तै हुन् । त्योभन्दा राम्रो बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । सन्तानको माया कसलाई लाग्दैन ?
साहित्यले समाजलाई र परिवेशलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । हिजोको समाज व्यवस्था, जीवनशैली, सामाजिक र आर्थिक छट्पटीलाई साहित्यले टिपेको थियो । आज पनि त्यसरी नै समाज, परिवेश र जीवनवृत्तिलाई साहित्यले बोकेको छ । तर हिजोका साहित्यको कलामूल्य, अभिव्यञ्जना शैली र पात्र टिप्ने प्रवृत्ति केही बदलिएको पाएको छु । हिजो धेरै सिर्जना सर्वकालीन मूल्यका हुन्थे । तर अहिले त्यसबाट विषयान्तर हुँदैछ । हिजो साहित्य सिर्जनाले मन छुन्थ्यो, हृदयमा बस्थ्यो, अहिले मष्तिस्क र शरीरसँग नाता जोड्न गइरहेको छ । समाजको निर्वैयक्तीकरण र यान्त्रिकीकरणले पनि यसो भएको हो । तर यही परिवशेमा जीवनलाई यान्त्रिकीकरणबाट उठाई मानवीकरण र हार्दिकीकरणमा लैजानु आवश्यक छ । यो नै सर्जकको युगीन दायित्व र चुनौती पनि हो ।
यथार्थ जीवनलाई बोक्ने, वास्तविक जीवनका अनुभूति र भावी जीवनका संकेत अनि आकांक्षा टिप्ने साहित्य लेखिनुपर्छ । अक्षरमा जीवन र आशा देखिनुपर्छ । मन छुने, हृदयमा बस्ने र अक्षर पढ्दा पाठकलाई आफैं अक्षर भएको अनुभूति हुने सिर्जना हुनुपर्छ । ‘शब्द थुपारिकन के हुन्छ, भाव भए पो हुन्छ’ (कवि धरणीधर कोइराला) ।
प्रत्येक स्रष्टाका आफ्नै प्रेरक पक्ष हुन्छन् । मैले मेरो कुरा भन्ने हो । मलाई परिवेश र प्रकृतिले प्रेरणा दिन्छ । अभावमा भाव फुर्छ । दुखमा प्रत्येक मानिस सर्जक हो, अक्षरमा सिर्जना नगरे पनि । त्यसैले मेरा भोगाइ, छट्पटी, पीडा र अपेक्षा नै लेखनीलाई प्रेरणा दिने कारक हुन् । मेरा लेखनीका अक्षर मेरा अनुभूति पोख्ने माध्यम हुन् । म मेरा पीडा, भोगाइ, अपेक्षा र उहापोह कसलाई बताऔं सिबाय मेरा अक्षर । अक्षर नै मेरा मनका वारिस हुन् ।
हो– प्रत्येक सिर्जनाका समय हुन्छन् । लेखनको आफ्नै वातावरण हुन्छ । कुनै वातावरणमा तत्काल लेख्न सकिएन भने त्यो सिर्जना त्यही अर्थ र ओजमा फेरि सिर्जिंदैन । मलाई एकान्त वा त्यही परिवेश चाहिन्छ– जुन परिवेशमा त्यो अनुभूति भएको थियो । त्यस्ता समय धेरै पाइँदैन, दुःख वा उहापोहको अनुभूति भएको समयमा लेख्न नपाएर म छट्पटिन्छु । तर सार्वजनिक जिम्मेवारीले त्यसमा भाँजो हाल्छ । समाज र पारिवारिक अवस्थाले पनि छेक्छ ।
अघि नै भनिसकें– सिर्जनाका लागि मलाई खास वातावरण चाहिन्छ । त्यही समय चाहिन्छ । अर्को वातावरण अर्कै सिर्जनाको हो । खास वातावरणमा मैले त्यही पात्र टिप्छु र उसको अनुभूति आफूमार्फत पोख्छु वा आफ्ना भावना कुनै पात्रमार्फत पोख्छु । प्रत्येक पात्रका लागि छुट्टै वातावरण चाहिन्छ, प्रत्येक वातावरणको छुट्टै पात्र हुन्छ ।
लेख्ने विषयवस्तु आफ्नै परिवेश, कार्यवातावरण र भोगाइबाट छान्ने गरेको छु । मैले काम गरिरहँदा सेवाग्राही नै लेखनीको विषय बन्छ । प्रकृति पनि लेखनीको विषय बन्ने गर्छ । जिम्मेवारीमा काम गर्दा दीनदुखी सर्वसाधारणका विम्ब मेरा लेखनका विषय बन्ने गर्छन् । धेरै अवस्थामा ‘म’ विम्बमा समाजका कुरा लेखनका विषय बनेका छन् । किनकि जीवन वा यसका भोगिँदो यथार्थ नटिपेको विषय साहित्य बन्न सक्दैन ।
लेख्ने विषयवस्तु परिवेशले निर्धारण गर्छ ।
हो त नि । सच्चा साहित्य परिवेशको पृष्ठभूमिमा उभिएको हुन्छ । जीवन्त सिर्जनाको विषय परिवेशले निर्धारण गर्छ । अहिले म वाल्यानुभूति, बालहठ र बालमनोभावलाई सही अर्थमा उतार्न सक्दिनँ । लेखें भने पनि अक्षरले सम्प्रेषण नै गर्दैन वा कम गर्छ । मेरी आमा स्वर्गीय भएको परिवेशले ‘मन, आमा र रोशी खोला’ जन्मायो । राजाले प्रत्यक्ष शासन गरेर नागरिकलाई दुःख दिएको समयले ‘आन्दोलित मन र प्रजातन्त्र’ जन्मायो । सशस्त्र द्वन्द्वको पीडाका समयमा ‘संवेदना नभएका हामी’ जन्मियो । त्यो परिवेशमा अहिले त्यही अनुभूति टिप्न सकिँदैन । लेखियो भने इतिहास वा घटनावृत्तिमात्र बन्छ ।
पात्र, परिवेश र समाजलाई न्याय गर्ने सामथ्र्य नै स्रष्टाको गुण हो । लेखनाथ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, सिद्धिचरण, बीपी कोइराला, पारिजातहरुले पात्र परिवेश र समाजलाई न्याय गरे । राजा वीरेन्द्रका समयमा ‘पञ्चायतको चाहना, शान्ति र सिर्जना’को स्तुतिगान गर्नेहरुले साहित्यप्रति न्याय गरेनन् । ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन चलाउँदा ठूला भनिएका साहित्यकार र कलाकार पनि स्तुतिमा नै लागे, उनीहरुमा पनि स्रष्टागुण रहेनछ । अभावमा देवकोटाले लेखे, पीडामा पारिजातले लेखिन्, जेलमा बीपीले लेखे तर पात्र, परिवेश र समाजलाई न्याय गरे । त्यसैले उनीहरु सर्वकालीन छन् । जीवन उठाउने कला स्रष्टामा हुनुपर्छ । ऊ विचार, मूल्य, आग्रह र दर्शनको दास हुनुहुँदैन ।
सबै विधा उत्तिकै प्रिय र महत्वपूर्ण लाग्छ । निबन्धले मनका भावनालाई उदात्त रूपमा पोख्छ । कथाले खास घटनावृत्तिलाई उन्छ । कविता, नियात्रा, उपन्यास, नाटक, मुक्तक सबै नै महत्वपूर्ण छन् । सबैले जीवनका अनुभूति र आकांक्षालाई अभिव्यक्त गर्ने हो । विज्ञान कथा (साइफाइ) र हाइकू पनि महत्वपूर्ण छन् । कुनै एक विधालाई महत्व दिनु अन्याय हो । प्रस्तुति र उद्बोधन महत्वपूर्ण हो, विधा सबै समान छन् । पाठकहरु आफ्ना स्वाद र सन्तुष्टिमा कहिले कुन त कहिले कुन विधातिर लहसिन्छन्, फरक त्यत्ति हो ।
साहित्य सिर्जनामा जीवन त हुन्छ नै, कल्पनाका अंश पनि हुन्छन् । कल्पना पनि जीवनको अंग हो । त्यसैले साहित्य सजीव हुनु भनेको कल्पना हुनु पनि हो । सजीवतामा कल्पना हुन्छ । कोरा घटनामात्र साहित्य हुँदैन, न कल्पनाको फेन्टेसी मात्र साहित्य हो । संयोजन कसरी गर्ने भन्ने हो । देवकोटा कल्पनामा आकाश छुन्थे तर ती जीवनका उद्वेग थिए । मेरा ‘कथानिबन्ध’ मूलतः सजीवता तथा कल्पनाका संगम हुन् । त्यसैले मैले कथानिबन्ध भन्ने गरेको छु ।
सिर्जनामा बाध्यता हुँदैन, बाध्यतामा सिर्जना फुर्दैन पनि । सिर्जनामा कलाकारिता चाहिन्छ, बाध्यताले यान्त्रिकता जन्माउँछ । बाध्यतामा लेखियो भने त्यो साहित्य नभई अरु नै बन्ने गर्छ । तर केचाहिँ हो भने खास परिवेशका जीवनवृत्ति उठाउने बाध्यात्मक अवस्था कहिलेकाहिँ आउन सक्छ र त्यसले अजीव साहित्य सिर्जना गर्छ, त्यो साँच्चै अर्थवत्ताको हुन सक्छ ।
लेखक नयाँ र पुरानो हुँदैन । दृष्टिकोणले नै नयाँ वा पुरानो हुने हो । सिर्जना सर्वकालिक हुनुपर्छ । यहाँले भन्न खोज्नुभएको भर्खरै लेख्न थालेका भाइबहिनीलाई हो भने मेरो अनुरोध छ– अक्षरको संयोजनमात्र नगर्नुहोस् । जीवनका व्यक्तिन नसकेका अनुभूतिको अभिव्यञ्जना सरल, मीठो र कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस्– जसले समाजलाई सिर्जनात्मक तनाव पनि देओस् । नामै लिँदा अन्याय हुन्न भने सुदेश सत्यालका छन्द कविताजस्ता सिर्जनाले समाजलाई केही दिन्छ । मैले नाम नलिएका अरु धेरै सर्जक पनि समाजमा छन् ।
यदि त्यसो गर्छन् भने त्यो दलको साहित्य हो– समाजको होइन । दल ‘पार्टी’ले चलाउँछ, पार्टी ‘पार्ट’को मात्र हुन्छ– ‘होल’को हुँदैन । ‘पार्टी’ले विचार, दर्शन, भूगोल, सिद्धान्त, वर्गको पार्ट मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले त्यो पार्टी हो । साहित्य समग्रको हुन्छ– ‘पार्ट’को हुँदैन । सर्वकालिक हुन्छ, समय र सिद्धान्तमा विभाजन हुँदैन, निष्ठामा खण्डीकृत हुँदैन । ‘पार्ट’को आग्रह गर्नेले जीवनका अनुभूति टिप्नै सक्दैनन् भन्ने मेरो धारणा हो । त्यसैले साहित्य दलको हुँदैन– जीवनको हुन्छ । ‘पार्ट’को हुँदैन ‘होल’को हुन्छ ।
अन्त्यमा केही भन्न छुटेको भए ?
नेपालमा राम्रा प्रतिभा बनपाखा, अरब, मलेसियातिर लुकेका छन् । अब त सामाजिक सञ्जालका सस्ता खुराकमा समाज भुल्न थालेर अमूल्य जीवन बर्बाद होला कि जस्तो भएको छ । लुकेका प्रतिभा खोज्नु, प्रोत्साहन गरेर एकातर्फ नेपाली समाजलाई सिर्जनात्मक सन्देश दिनु र अन्ततः नेपाली साहित्यलाई विश्वस्तरमा पु¥याउनु आवश्यक छ । सम्भावना छ, प्रोत्साहन छैन । प्रतिभा प्रोत्साहनले मौलाउने हो । नेपाली साहित्यलाई यसरी प्रोत्साहन गर्नुप¥यो कि स्रष्टाले अक्षरका आधारमा नै जीवन धान्न सकोस् । सधैं गुमेको अवसर बनाउनु हुन्न मुलुकलाई । यहाँको प्रकृति, संस्कृति, विविधता, सबै नै सिर्जनाका पृष्ठभूमि हुन्, केवल प्रोत्साहनको प्रतीक्षा छ । प्रोत्साहन नभए पनि सिर्जना त जन्मिन्छ, तर त्यो आत्मानन्द र दुखको विरेचनमा सीमित हुन्छ । प्रस्तुति : जयराम सापकोटा